५० लाख पर्यटक असम्भव होइन – श्वेतपत्र
५० लाख पर्यटक असम्भव होइन
नेपाली पर्यटनको इतिहास ६८ वर्ष पुरानो भइसक्यो । तर, अझै हामी १० लाख पर्यटकमा अडिएका छौं ।
नेपाली पर्यटनको इतिहास सन् १९५० को दशकबाट सुरु हुन्छ । सन् १९५० मा फ्रेञ्च नागरिक मरिस हर्जोग र लुइस लाकनलले अन्नपूर्ण हिमाल आरोहण गरे । सन् १९५३ मा एडमन्ड हिलारी र तेञ्जिङ नोर्गे शेर्पाले सगरमाथाको चुचुरो पुगे ।
विश्वकै अग्ला चुचुरामा मानव पाइला परेपछि नेपालको विश्वभरी चर्चा भयो । नेपाल हिमालयको मुलुक भनेर चिनिन थाल्यो । हिमालको सफल आरोहणपछि नेपाली पर्यटनको सुरुवात भयो । त्यही समयमा भारत पनि ब्रिटिस साम्राज्यबाट स्वतन्त्र भयो ।
नेपालमा सन् १९५८ मा प्याकेज टुर सुरु भइसकेको थियो । बोरिस लिसानोभिचले बहादुर भवनमा रोयल होटल खोलेर पर्यटकलाई प्याकेज बेच्न सुरु गरिसकेका थिए । रोयल होटलमा विदेशी पर्यटक आउँथे । उनले पर्यटक घुमाउँथे पनि ।
सन् १९६० को दशकमा हिप्पी मुभमेन्ट आयो । बेलायती आर्मीका कर्णेल जिम्मी रोबर्टस्ले ट्रेकिङ सुरुवात गरे । जिमले हन्टिङ कम्पनी र टाइगर टप्स रिसोर्ट खोलेर सफारी पर्यटन सुरु गरेका थिए । पर्यटकीय मुलुकको रुपमा नेपालको ब्रान्डिङ त्यहीबेला भइसकेको थियो । तर, नेपालले पर्यटनबाट प्रयाप्त लाभ लिन सकिरहेको छैन ।
नेपाल एउटा घुम्नै पर्ने मुलुक हो । एउटा रमणिय मुलुक हो । सानो मुलुकमा हरेक चिज हेर्न पाइन्छ । साहसिक पर्यटन होस्, सांस्कृतिक पर्यटन होस् वा वाईल्ड लाईफ होस्, नेपालमा हरेक किसिमको प्याकेज प्रोभाइड गर्न सकिन्छ । नेपालमा ५० लाखमात्र होइन, करोडौं पर्यटक भित्र्याउन सकिने सम्भवना छ ।
नेपालमा ठूलो संख्यामा पर्यटक आउँदा पनि स्तरीय सेवा सुविधा पुर्याउन सकिन्छ । हाम्रो सेवाबाट अहिलेसम्म कुनै पर्यटक बेखुसी भएर फर्किएको छैन । हामी स्तरीय सेवा दिन सक्षम छौं । माओवादी जनयुद्धमा समेत नेपालमा पर्यटकमाथि त्यति हमला भएन । नेपाल पर्यटकका लागि सुरक्षित मुलुक रह्यो ।
पर्यटन नेपालको भरपर्दो उद्योग पनि हो । मुलुकमा १० वर्ष लामो माओवादी जनयुद्धमा पनि पर्यटन उद्योग मरेन । दुःख चाहीँ पायौं । तर, दुःख सुख चल्यो । यो नेपालका लागि गतिलो उद्योग हो । पर्यटनको राम्रोसँग स्याहार सुसार गर्न सकियो भने सम्पूर्ण नेपालीलाई पाल्न सक्छ ।
लक्ष्य २० लाख पर्यटक
सरकारले नेपाल भ्रमण वर्ष, २०२० घोषणा गरेरै वार्षिक २० लाख पर्यटक भित्र्याउने घोषणा गरेको छ । अहिले आइरहेको पर्यटकको संख्या दोब्बर बनाएपछि २० लाख पुग्नेछ । नेपाली पर्यटनको इतिहास ६८ वर्ष पुगिसकेको छ । यस अवधिमा बल्लतल्ल साढे १२ लाख पर्यटकको लक्ष्य पुरा हुँदैछ । हुन त सरकारले १० लाख पर्यटकको लक्ष्य राखेको थियो । सोँचेभन्दा दुइ लाख पर्यटक बढी भित्रिएका छन्। यो सकरात्मक हो ।
नेपालमा २० लाख पर्यटक ल्याउने साधन स्रोत छ कि छैन ? पर्यटक राख्ने ठाउँ त छ । यदि धेरै पर्यटक आउँछन भने हामी रातारात होटल पनि बनाउँछौं । र, बस पनि किन्छौं । नेपाली पर्यटन टेन्टेड क्याम्पबाट सुरु भएको थियो । हामी स्तरीय टेन्टेड क्याम्प पनि राखौंला । अहिले ठूलो संख्यामा होटल बन्दैछन् । डेढ दर्जनभन्दा बढी त पाँचतारे होटल बनिरहेका छन् । नेपालमा २० लाख पर्यटक राख्नका लागि होटल तयार भइसकेका छन् ।
याे पनि पढ्नुहाेस् : देशभर २० वटा पाँचतारे हाेटल थपिँदै
पर्यटनको लामो इतिहासमा हाम्रो एउटै समस्या रह्यो, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल । नेपालमा पर्यटन विकासको अवरोध भनेकै एयरपोर्ट भनिरहेका छौं । अहिले एउटैमात्र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पर्यटक आइरहेका छन् । त्यसमाथि त्रिभुवन विमानस्थलको व्यवस्थापन चुस्त देखिँदैन् ।
सरकारले २० लाख पर्यटक भित्र्याउने आधार निर्माणाधिन भैरहवा विमानस्थललाई देख्यो होला । यो विमानस्थल सन् २०१९ भित्र सञ्चालनमा आइसक्ने बताइएको छ । त्रिभुवन विमानस्थल पनि चौबिसै घन्टा सञ्चालन गर्ने तयारी हुँदैछ । दुईवटा विमानस्थल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुने र विदेशमा व्यापक रुपमा पर्यटन प्रवद्र्धन गरेमा लक्ष्य हासिल हुन्छ ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले चुनावी घोषणापत्रमा २०२७ सम्ममा ५० लाख पर्यटक भित्र्याउन लक्ष्य राखेको छ । गठबन्धन बनाएर चुनावी मैदानमा होमिएका एमाले र माओवादी एक भएर नेकपा बनेको । जसको दुई तिहाई बहुमतको सरकार छ ।
यो सरकारले चाहेमा ५० लाख पर्यटकको लक्ष्य पनि हासिल हुन्छ । किनकी, नेपालमा ५० लाख पर्यटकका लागि होटल तयार भइसक्ने छन् । र, पर्यटक तान्ने प्रडक्ट प्रयाप्त छन् ।
सन् २०२७ सम्ममा निजगढ र पोखराको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि सञ्चालनमा आइसक्छन् । सरकारले बजेटमार्फत तराईका चारवटा विमानस्थलको स्तरोन्ती गरी भारतमा उडान गर्न लायक बनाउने घोषणा गरिसकेको छ । यो काम पनि सकिएला । यदि सरकार गम्भिर भएर लागेमा भारत र चीनबाट रेल पनि आइपुग्ला ।
एयरपोर्ट व्यवस्थापन चुस्त बनाउँ
नेपालमा एयरपोर्ट व्यवस्थापनमा समस्या देखिन्छ । यही आकारको विमानस्थल भएका विदेशी मुलुकले हामीले ह्यान्डल गरेभन्दा २० गुना बढी पर्यटक ह्यान्डल गरिरहेका छन् । हामीले राम्रो व्यवस्थापन गर्न सकेमा २० लाख पर्यटक भित्र्याउन एउटै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल प्रयाप्त हुनेछ ।
सरकारले २० लाख पर्यटक भित्र्याउने भनेको पनि वर्ष दिन पुग्न थालिसक्यो । तर, अहिलेसम्म कसरी भित्र्याउने रणनीति बनेको छैन । कुन मुलकबाट कति पर्यटक ल्याउने ? कसरी ल्याउने ? मार्केटिक कसरी गर्ने ? कसरी अगाडि बढ्नै ? नेपालको बारेमा भइरहेको नेगेटिभ पब्लिसिटी कसरी खन्डन गर्ने ? र, पोजेटिभ समचार कसरी प्रवाह गर्ने ? यस्तो रणनीतिक योजना ल्याउन ढिलो हुन लाग्यो ।
पर्यटक भित्र्याउने एउटा तार्गेट त राख्नै पर्छ । हामी १० लाख पर्यटकमा अल्झिएर बस्नु हुँदैन । यदि सरकार गम्भिर भएमा २० लाख पर्यटक पुग्छन्, यदि नपुगे पनि १५ लाख त पु¥याउन सकौंला नी । अहिलेदेखि नै लागेमा २०२७ को ५० लाख पर्यटक लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ ।
मेरो बिचारमा २० लाख पर्यटक महत्वाकांक्षी लक्ष्य होइन । तर, त्यो लक्ष्य हासिल गर्न मेहेनत गरेनौं भने सफलता मिल्दैन । सबै पक्ष (सरकार, निजी क्षेत्र) एकजुट भएर लाग्नुपर्छ । हाम्रो मुख्य समस्या अन्तर्राष्ट्रिय बजारीकरण हो । यसमा पनि कार्ययोजना बनाएर लाग्नुपर्छ । कुन बाटो जाने र कसरी पर्यटक ल्याउने । यसमा स्पष्ट हुनुपर्छ ।
समय कम भएकोले २० लाख पर्यटक ल्याउन हम्मेहम्मे त पर्ला । किनकी, पर्यटक दोब्बर पु¥याउन लागेका छौं । तैपनी मेहेनत गरेमा असफल भइएला झैं लाग्दैन । तर, त्यसमा कति सिरियस छौं भन्ने हो ।
सम्भव छ, ५० लाख पर्यटक ?
हामीले २०२० को लक्ष्य कति भेट्याउँछौं । त्यसैले २०२७ को भविष्य निर्धारण गर्नेछ । वार्षिक ५० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्यमा पुग्न सकिन्छ कि सकिदैन भनेर अढाई वर्षपछि थाहा हुनेछ । विमानस्थल, सडक र ट्रफिक कन्जेसनबाहेक निजी क्षेत्रले होटेल, रेष्टुरेन्ट, ट्रेकिङ लगायतका आवश्यक सेवा सुविधाहरु उपलब्ध गराउन सक्षम छौं ।
अहिले देशमा इन्टरनेशनल होटल चेन आइरहेका छन । सुविधा सम्पन्न होटल बनिरहेका छन् । वार्षिक २० लाख पर्यटकलाई अहिलेकै होटलले सुविधा पुर्याउन सक्छौं । देशमा पर्यटक आगमन बढ्ने र यही रफ्तारमा होटलमा लगानी भइरहे ५० लाख पर्यटक धान्ने होटल छिट्टै तयार भइसक्ने छन् ।
१० वर्षमा नेपाल भित्रिएका पर्यटक
वर्ष पर्यटक संख्या
स्रोतः पर्यटन मन्त्रालय
नेपाल वाइल्ड लाइफ टुरिजमको पायोनियर हो । हामीले अरुलाई सिकाएका हौं । तर, सरकारले निकुञ्ज भित्रका होटललाई गलहत्याएर निकालेको छ । यो गलत थियो । अहिले पनि अफ्रिकाले वाइल्ड लाइफ टुरिजममा लिड गरिरहेको छ । उसले पुरै राष्ट्रिय निकुञ्ज निजी क्षेत्रलाई जिम्मा लगाएको छ । बरु कानुन कडा बनाउ, बदमासी गर्नेलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर । तर, निकुञ्जभित्र होटल चलाउन देउ ।
नेपाल ट्रेकिङको पनि पायोनियर हो । सन् १९६० को दशकमै बेलायती आर्मीको कर्णेल जिम्मी रोवर्टसले नेपालमा ट्रेकिङ सुरु गरेका हुन् ।
अबको पर्यटनमा रिसर्च बेस्ड मार्केटिङ हुनुपर्छ । अनिमात्र लक्ष्य हासिल हुन्छ । हाम्रो देशमा द्धन्द्ध रोकिने वित्तिकै पर्यटकको संख्या ह्वात्तै माथि बढ्यो । हामीले कुनै मार्केटिङ गरेर होइन । रिसर्च पनि गरेको होइन । तर, राम्रो सन्देश संसारभर पुग्यो । नेपालको ब्रान्डिङ पहिल्यै भइसकेको छ । सगरमाथा नेपालमै छ । आठ हजार मिटर अग्ला चढ्न नेपाल नै आउनु पर्छ । एक सिंगे गैंडा र बाघ हेर्न पनि नेपाल धाउनु पर्छ ।
हामीले भिजिट नेपाल १९९८ र भिजिट नेपाल २०११ प्नि मनायौं । हामी मार्केटिङमा जान्छौं, सरकारी पैसा खर्च गर्छौं । तर, त्यसको अडिटिङ कहिल्यै पनि हुँदैन । हामीले अडिट गर्नैपर्छ । हामी इमान्दार हुनैपर्छ । मैले गरेको काम सफल भयो भनेर चारवटा अखबारमा लेखाएर, ट्वीट ठोकेर पुग्दैन ।
हामीले अडिट गरेपछि अर्को वर्ष कमजोरी सच्चाउन पाइन्छ । २०२० मा १५ लाख पर्यटक आयो रे । हामीले किन ५ लाख पर्यटक आएनन् भनेर अध्ययन गरेमात्र २०२७ सम्ममा ५० लाख पु¥याउन सकिन्छ । हामीले करेक्सन गर्ने बानी बसाल्नुपर्छ । पर्यटनबाट फड्को मारेका मुलुकले पनि पर्यटक आगमन बढाउन यसै गरेका हुन् ।
पर्यटक भित्र्याउन पर्यटकीय पूर्वाधार विकास हुनैपर्छ । विमानस्थल, सडक निर्माण हुनुपर्छ । सरकारले बनाउन खोजेका त्रिभुवन विमानस्थल स्तरोन्नती, भैरहवा विमानस्थल, पोखरा विमानस्थल, निजगढ विमानस्थल तोकिएकै समयमा सम्पन्न गर्नुपर्छ ।
चीन र भारतबाट रेल ल्याउने कुरा छ । त्यसलाई पनि मुर्त रुप दिनुपर्छ । पूर्व–पश्चिम (महेन्द्र) राजमार्ग, महेन्द्र राजमार्गको समानान्तर विद्युतीय रेल, चीन जोड्ने नाकाको स्तरोन्नती, बुटवल–पोखरा, पोखरा–काठमाडौ सडक ४ लेनमा स्तरोन्नती लगायत काम समयमै सम्पन्न गर्नुपर्छ । नागढुंगाको जाम हटाउन सुरुङ निर्माण गर्ने कुरा छ । त्यो पनि समयमा हुनुपर्छ ।
हाम्रो सडक पनि राम्रो भएन । केही समय मुग्लिन–नारायणगढ सडकले दुःख दियो । धेरै वर्षदेखि नागढुंगाको बाटोले सताइरहेको छ । यो बाटो छिचोल्नै समस्या हुन्छ । यस्ता सानो कुरमा पनि ध्यान पु¥याउनु पर्छ ।
नेपालको तराईदेखि सगरमाथाको चुचुरोसम्म छ । यहाँ धेरै प्रकारको पर्यटकीय प्रडक्ट छ । म भन्छु, सम्पूर्ण नेपाल नै पर्यटकीय प्रडक्ट हो । हाम्रा हरेक जिल्लामा पर्यटकीय प्रडक्ट छन् । हामीले जे देखाएर पनि पर्यटक खुशी पार्न सकिन्छ ।
हामीले कुन–कुन मुलुकबाट पर्यटक बढी भित्र्याउन सकिन्छ । कुन–कुन मुलुकलाई कम प्राथमिकता दिए पनि हुन्छ । यसमा रिसर्च हुनुपर्छ । कुनै मुलुक आर्थिक संकटमा छ भने त्यहाँ पैसा खर्चिएर गरेर मार्केटिङ गर्नु आवश्यक छैन ।
हामीले भारत र चीनलाई फोकस्ड गर्नैपर्छ । नेपालका भरपर्दो पर्यटक भारतीय र चिनियाँ हुन् । बरु धेरै भारतीय र चिनियाँ भित्र्याउन पहल गर्नुपर्छ । भारतबाट१०÷२० लाख पर्यटक ल्याउनु कुनै ठूलो कुरो होइन । चीनबाट ५÷१० लाख पर्यटक सजिलै भित्र्याउन सकिन्छ ।
हाम्रो ट्रडिस्नल मार्केट पनि छन् । अमेरिका, बेलायत, जर्मन, फ्रान्स, स्पेन, इटाली लगायत मुलुकबाट आउने पर्यटकको संख्या बढाउन पनि पहल गर्नुपर्छ । दक्षिण पूर्वी मुलुकबाट पनि प्रशस्तै पर्यटक घुम्न निस्कन्छन् । हाम्रो लागि दक्षिण पूर्वी मुलुक पनि महत्वपूर्ण हुन् ।
लेखक बसन्त मिश्र बरिष्ठ पर्यटन व्यवसायी हुन् ।
४ फाल्गुन २०७५, शनिबार १९:०० मा प्रकाशित
Related Topics:२० लाख पर्यटक५० लाख पर्यटकपर्यटनपर्यटन व्यवसायीबसन्त मिश्र